Miasa Mba Hampitombo ny Fahalalan’ny Vahoaka ny Fiainana Manokana Amin’ny Aterineto Ireo Vondrom-piarahamonin’ny Teknolojia Misokatra ao India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 04 Febroary 2017 14:36 GMT
Vakio amin'ny teny English, Ελληνικά, Español, Português, English
Mozilla L10N Hackathon tany Pune, India. Sary avy tamin'i Subhashish Panigrahi tao alalan'ny Wikimedia (CC BY-SA 4.0)
Mpirotsaka an-tsitrapo mpanentana Vondrom-piarahamonina ao Azia ho an'ny Vondron'orinasa Mozilla i Subhashish Panigrahi, no sady mpanoratra sy mpadika teny ho n'ny Global Voices.
Manjo ireo rehetra mpisera amin'ny Aterineto manerana ny tany ireo olana mikasika ny fiarovana amin'ny Aterineto sy ny fitandroana ny fiainana manokana, fa mazàna no maranitra kokoa io any amin'ireo firenena an-dalam-pandrosoana sahala amin'i India. Vinavinaina ho olona 50 tapitrisa isantaona any India no hanomboka hampiasa io manomboka izao ka hatramin'ny taona 2020. Ary raha amin'ny teny Anglisy ny ankamaroan'ireo teny amin'ny Aterineto, mbola mievaeva eo anelanelan'ny 10-30% any India ny fahaizana mamaky sy miteny amin'ny fiteny Anglisy, ary tena zara raha ahitana votoaty amin'ny fiteny fototr'i India toy ny Hindi, Bengali sy Tamil ao amin'ny Aterineto. Ireo nsy fanamby maro hafa no mahatonga ireo Indiana ho marefo tokoa manoloana ireo rahona mitatao ao amin'ny Aterineto.
Tao anatin'ireo taona lasa, nanao hetsika mba hampitomboana ny fahalalàna mikasika ireo olana amin'ny fiainana manokana amin'ny Aterineto, na ao amin'ny sehatry ny Aterineto na amin'ireo hetsika ivelany, ireo vondrom-piarahamonina malalaka sy misokatra.
Nanomboka ny volana janoary 2016 ireo ezaka ireo, niaraka tamin'ny “January Privacy Month (Janoary, Volan'ny Fiainana Manokana ),” fankalazana nitarina avy tamin'ny Data Privacy Day (Andron'ny Angona momba ny Fiainana Manokana), izay nikarakaran'izy ireo hetsika tety anaty Aterineto niaraka tamin'ireo hetsika maro tao an-tanàna, natao hampahafantarana ny vahoaka ny amin'ny rahona mitatao izay mety atrehina ao amin'ny Aterineto, ary ny fomba hiarovanao ny tenanao manoloana ny faharefoana. Tato anatin'ny taona vitsivitsy, nalaza tokoa tao India sy tany amin'ireo firenena hafa ny Data Privacy Day, ary manana anjara toerana lehibe amin'ny fampianarana ireo olon-tsotra sy fikambanana, mikasika ireo lalànan'ny fiainana manokana.
Tamin'ny taona lasa, nizara torohevitra iray isanandro momba ny fiarovana ny fiainana manokana ilay hetsika nandritra ireo 31 andro ao anatin'ny volana. Milazalaza ireo ezaky ny Mozilla ho an'ny taona 2017 ny mpikarakara ny fanentanana Mozilla, Ankit Gadgil :
Amin'ity taona ity…nataonay misokatra sy maneran-tany kokoa ilay hetsika. Mandray anjara mavitrika tokoa ireo vondrom-piarahamonina Mozilla avy any Brezila, Italia sy Repoblika Tcheque….Mampianatra ireo mpandray anjara izahay momba ireo hetsika ivelan'ny Aterineto hivarotana ny Firefox sy ireo vokatra Mozilla hafa, amin'izay ireo mpampiasa afaka manana traikefa mivantana amin'ny fampiasàna ireo fitaovana ireo, izay manampy amin'ny fiarovana ny fiainany manokana. Ny fahatelo dia, mandrisika ireo rehetra mandray anjara amin'ny hetsika ivelan'ny Aterineto izahay mba hitoraka bilaogy ny zavatra nianarany. Vao haingana, ohatra, nisy ‘Maker Fest’ tao amin'ny fanjakana Indianan'i Gujarat izay nampiasan-dry zareo ireo vokatra Mozilla mba hampianarana mikasika ny fiainana manokana.
Nampiasaina ny tenifototra iray #PrivacyAware (Fahafantarana ny Fiainana Manokana) fanentanana taorian'ny hetsika mba hiarahana mihetsika miaraka amin'ireo mpandray anjara. Nitady izay hanentanana ireo mpampiasa momba ireo vahaolana entina miaro mipetraka ao amin'ny fitety ihany koa ny hetsika, indrindra ireo tena afaka jeren’ireo olona manana fahasembanana.
Aleo voaaro tsara eo am-pikarohana! Fitaovana vitsivitsy atoronay:
HTTPS Everywhere, fitaovana izay miasa ho an'ireo fitety Chrome sy Opera, mametraka kaody fiarovana ireo angon-drakitra ifandefasanao sy ireo vohikala tsidihinao, misoroka ireo ankolafy fahatelo tsy ho afaka hijery ireo zavatra ataonao ao amin'ny Aterineto. Niarahan'ny The Tor Project sy ny Electronic Frontier Foundation niasa ny nanao ilay tetikasa.
Adblock Plus dia iray amin'ireo fihitarana malaza indrindra izay ampiasaina mba hibahanana ireo doka, mampiato ny fanarahana ny mpitsidika ary manakana ireo vohikala tsy ho afaka hanaparitaka rindrambaiko ratsy saina. Afaka hita ao amin'ireo fitety malaza indrindra ity fanitàrana io, tafiditra amin'izany ny Chrome sy Opera.
Privacy Badger , fanitarana iray hafa malaza ho an'ny fiarovana, novelabelarin'ny Electronic Frontier Foundation ihany koa. Afaka hita amin'ireo fitety maro malaza ilay fanitarana, tafiditra amin'izany ny Chrome sy Opera.